Kuyini ebuntwaneni ukukhunjulwa ngani? Ukuze ingane - kusho qhaqha amaxhaphozi, ukubukela opopayi zakho ozithandayo, ugibele kwemizwelo futhi sifinyelele kwi trampoline. Uma nanini fanele potsho ukuzwa umuzwa a gxuma futhi imizwelo yayo Uyokukhumbula lo muzwa. Ngakho-ke, iyiphi trampoline inflatable njalo kuletha injabulo ezinganeni, futhi ukubonakala kwakhe kwenza fun iholidi futhi usiza ehlukahlukene yokuzilibazisa ngezinga elingakanani.
Ngaphandle ukuthi njalo kuthuthukisa kwemizwelo futhi kuletha izingane zakhe ngaso, Bouncer kuletha izinzuzo ezingokoqobo wentuthuko.
Okokuqala, ngesikhathi izingane lapho frolic kuwo, eziningi imisipha isebenze. Ngakho, kuzuba kukhona Amazing omuhle ngokomzimba. Ngaphezu kwalokho, i-trampoline inflatable kuyinto ngempela esithambile, ngakho-ke, ngokungafani kuya umzimba kwezinye izindawo, umntwana uyogwema ukulimala nemihuzuko, ngisho naphakathi ukunyakaza kungazelelwe. Ngesikhathi lo mdlalo eba ngaphezulu futhi dexterity, ukunakwa, isivinini yokusabela izitimela.
Ngoba zonke izingane ukudlala a trampoline kuyinto osenyameni kakhulu, futhi uma ingane yakho okuningi siphumule ngokwengeziwe esebenzayo, bese umsebenzi okunjalo kuyoba usizo ikakhulukazi kuye. bechitha Naskakavshis amaningi namandla sekuqoqiwe, izoqoqwa futhi uzinzo lonke isikhathi. Ngakho, ngokufaka trampoline zasendlini, abathintekayo lapho izingane, ukuhlela break ukuphumula futhi ukuxoxa. trampoline Inflatable ngalo mqondo Ungashintshanisa ukugiji- imihubhe, okuyinto ebaluleke uma kukhona isikhala esincane wakhe. Ngemva ulwazi oluthuthukayo futhi izifundo izingane bayokujabulela ukuhambisa, futhi ngeke nje kumnandi, kodwa futhi ewusizo.
Okunye ongakusho trampoline - game abayitoho. Yiqiniso, into engcono kakhulu engatholwa ukuzijabulisa okunjalo - thematically, isihloko, kungaba trampoline - inqaba bouncy, trampoline, noma umkhumbi, noma ukuhlukahluka on isihloko opopayi nezinhlamvu zabo. Ngokuvamile lezi zakhiwo ukufakwa amapaki kanye tikwele, izindawo ezinkulu kule mpelasonto. Izingane nijabule njalo uma bebona bezihambela trampoline inflatable. Amanani ukuzijabulisa okunjalo ngokuvamile abazali kayimangazi, futhi ngokuvamile kulula ukuba uvumelane uphe ingane imizuzu emihlanu kuya kweyishumi injabulo. Ngakho kungenzeka ukuhlela ngempela ibhizinisi inzuzo uma usondela udaba ngokucophelela futhi sina.
izakhiwo ezincane zingafakwa izakhiwo zokudla noma emgwaqeni, eduze evulekile engxenyeni ehlobo. Ukunikela izivakashi alo nethuba sifinyelele a trampoline, abanikazi yokudlela ukuthola ukusakaza ezengeziwe amakhasimende abakhetha umndeni ukuphumula futhi ukudla ndawonye.
isimo Kuyisibopho ukusebenza ngempumelelo trampoline - ukugujwa zonke imithetho ukusetshenziswa, okuyinto zichazwe iziqondiso zomenzi wawo. Ngokunikeza le sevisi izingane, kumele ube uqiniseka ku ikhwalithi kanye nokuphepha isakhiwo. Naphezu kweqiniso lokuthi trampoline inflatable, kubalulekile ukuba anake nokuchazela izingane imiyalelo nokuphepha jikelele. Njalo babheke izingane kufanele othile kusuka abadala ukuqapha ukuziphatha kwabo, kanye kwenhlanzeko nokuhlanzeka we ebusweni.
Mane ukulungiselela a trampoline, ukunika izingane ilungelo ukuze azijabulele ekuphumeni kwakho - bese izingane ngeke ngiyabonga futhi ujabule!
USB fan - ekahle ukupholisa izinhlelo
Kungakhathaliseki esisebenzayo ukusebenzisa ikhompyutha amatafula elimhlophe?
UMark Kistler: izifundo zokudweba